दोस्रो बिहे गर्दा बिरोध गर्नेलाई स्वेताको जवाफ – Dainik Sangalo
दोस्रो बिहे गर्दा बिरोध गर्नेलाई स्वेताको जवाफ
December 7, 2020 364
काठमाडौँ । अभिनेत्री श्वेता खड्काले आफ्नो जीवनको दु:खद अध्याय बन्द गरेर खुसीको अध्याय सुरू गर्ने निर्णयमा आफू पुगेको बताएकी छन्। उनी मंसिर २२, सोमबारमा बिहे गर्दैछिन्। ‘म जीवनको दु:खद अध्याय बन्द गरेर खुसीको अध्याय सुरू गर्ने निर्णयमा पुगेकी छु,’ उनले बिहेको पूर्वसन्ध्यामा, आइतबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी छन्, ‘त्यसो भन्दैमा मैले मेरो अतीतलाई चटक्कै भुल्छु भनेको भने पक्कै होइन। अतीतका मीठा पलहरूलाई मनको कुनामा पोको पारी भविष्य सजाउने नवीन यात्रा थालनी गर्ने यो निर्णय लिनु म एक्लैका लागि सहज र सम्भव छँदै थिएन।’
उनले धनगढीका विजयेन्द्र सिहं रावतसँग लगनगाँठो कस्न लागेकी हुन्। आफ्ना परिवारका सदस्यको निरन्तर प्रयास, साथीसंगी, अग्रज र दिग्गज व्यक्तित्व लगायत शुभचिन्तकले दिएको हौसला, साहस र प्रोत्साहनकै कारण आफू यो निर्णय लिन सफल भएको उनले बताएकी छन्। श्वेताले थप लेखेकी छन्, ‘यति हुँदाहुँदै पनि मनमा एउटा प्रश्न भने अवश्य छ- के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णय स्वीकार गर्ला र? मलाई थाहा छ, श्वेताको आँखामा आँशु मात्रै देखिनुपर्छ भन्ने सोच बोकेका दुई चार जना व्यक्तिहरूलाई मेरो यो निर्णयले पोल्नेछ।’
म: जीवनको नवीन यात्रामा। जीवनका विभिन्न आरोह-अवरोह, उकाली-ओराली, सुख-दु:ख अनि हाँसो-रोदनका पललाई आत्मसात गर्दै आज जिन्दगीको अर्को एउटा मोडमा आइपुगेकी छु। जिन्दगीको यो मोडसम्म आइपुग्दा मैले जे-जस्ता पीर, व्यथा, दु:ख अनि कष्टसँग सामना गरेकी छु, त्यसभित्रको कहालीलाग्दो अनुभवहरूलाई शब्दमा बयान गर्न पनि असमर्थ छु।
‘अचानोको पीडा खुकुरीलाई थाहा हुन्न’ भनेझैं समयको दुश्चक्रले ममाथि प्रहार गरेको अनेकन प्रहार र त्यसबाट मैले भोगेको पीडा केवल मलाई मात्र थाहा छ। म देख्थेँ, मेरो अगाडि लम्पसार परेर सुतिरहेको जिन्दगीको लामो बाटो जसमा तिखा काँडा, ठूलाठूला पत्थर अनि आगोको ज्वाला छरपस्ट भएर छरिएका छन्।
मैले मेरो जीवनको बाटोमाथि छरपस्ट ती काँडाहरूलाई पन्छाउनु पर्नेछ। पत्थरहरूलाई फुटाउनु पर्नेछ। अनि आगोको ज्वालाहरूलाई नाघ्नु पर्नेछ। के म यसो गर्न सकुँला र?’ आफैंसँग प्रश्न गर्थेँ। आफ्नै प्रश्नमा आफैंले उत्तर दिन्थेँ, कि हुत्ती हारेर मर्नु पर्छ कि त हिम्मतका साथ अघि बढ्नुपर्छ।’ अत: मैले मृ’ त्‍युलाई रोजिनँ, जीवनलाई नै रोजेँ। अनि जिन्दगीका हरेक समस्याहरूसँग जुध्दै क्रमश: अगाडि बढ्दै गएँ।
‘एक्लै जीवन काट्न सकिन्छ’ भन्ने कठोर निर्णय लिएर विगत ६ वर्षदेखि एक्लै हिँडिरहेकी थिएँ म। मेरो यो एकल यात्राका बखतमा धेरैपटक लडेकी छु। ‘अब उठ्नै सक्दिनँ कि’ भन्ने कमजोर भावले थिचेको त्यो बेलामा आफ्नो हात समातेर उठाइदिने कुनै सहाराको आशा हुँदो रहेछ। महिनैपिच्छे करिब हप्ता दिनका लागि बिरामीको अवस्थामा पुग्ने मेरो शरीरले एक गिलास पानीसँगै औषधिको ट्याब्लेट मुखमा हालिदिने एउटा सहयोगको चाह हुँदो रहेछ।
मनभित्र गाँठो परेर बसेका अव्यक्त वहहरूलाई बोकेर हिँड्नु भनेको हजार टनको पत्थरलाई टाउकोमाथि बोकेर हिँड्नुभन्दा पनि कठिन रहेछ। तर मैले मेरा बहहरू व्यक्त गर्ने कोसँग? मैले साथीसंगतीहरूको भिडमा आँखा डुलाएर हेरेँ, तर मेरो पीडालाई महसुश गर्न सक्ने कोही देखिनँ। आफन्तको घेरामा खोजेँ तर माइतीमा शरण लिएर बसेको म एकल नारीले आफ्नो पीडा पोखेर माइतीलाई थप तनाव दिनु हुन्न भन्ने मनन गरेँ। अत: मेरो हरेक दु:खमा म एक्लै रोएँ, पीडाहरुमा आफैं सम्हालिएँ अनि अनेकन समस्याहरूसँग एक्लै जुधिरहेँ।
त्यसो भन्दैमा मैले मेरो अतीतलाई चटक्कै भुल्छु भनेको भने पक्कै होइन। अतीतका मीठा पलहरुलाई मनको कुनामा पोको पारी भविष्यलाई सजाउने नविन यात्राको थालनी गर्ने यो निर्णय लिनु म एक्लैको लागि सहज र सम्भव छँदै थिएन। तर मेरा परिवारका सदस्यहरुको निरन्तर प्रयास अनि साथीसंगतीहरू, अग्रज र दिग्गज व्यक्तित्वहरु लगायत मेरा शुभचिन्तकले प्रदान गर्नुभएको हौसला, शाहस र प्रोत्साहनले आज म यो निर्णय लिनमा सफल भएकी छु। यति हुँदाहुँदै पनि मनमा एउटा प्रश्न भने अवस्य छ ‘के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णयलाई स्वीकार गर्ला र?’
तर मप्रति साहनुभूति राख्ने, मलाई सदैव खुसी देख्न चाहने अनि सधैं मेरो सफलताको कामना गर्ने लाखौं शुभचिन्तकहरूको आशीर्वाद, सद्भाव र सुभेक्षाले मप्रति रिस र इर्ष्याको सोच राख्ने दुई-चार जनाले स्वत: हार खानेछन्। अत: कोरोना सन्त्रासका बीच जुरेको खुसीको माहौलमा मैले मेरा धेरै मित्रहरू, गन्यमान्य व्यक्तित्वहरू, संचारकर्मीहरू लगायत मेरा आफन्तहरू समेतलाई सामेल गराउन असमर्थ हुनेछु। महामारीको यो माहौलमा सीमित व्यक्तिहरूलाई साक्षी राखी जीवनको नयाँ यात्रा सुरू गर्दै गर्दा तपाईंहरू सम्पूर्णले मलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएकी छु।
उही तपाईंकी छोरी, श्वेता खड्का।
Prevपहिचान नखुलेको रोगका कारण तीन सय जना बिरामी, बिरामी पर्नेको संख्या बढ्दै
Nextनेपाल टेलिकमले शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम दिने
विमान दु’र्घटना हुनु भन्दा १० मिनेट अगाडी आफ्नो छोराछोरीसँग आमाले खिचेको त्यो अन्तिम हृ’दयस्प’र्शी फोटो
थपियो बर्जपात भर्खरै विमान दु’र्घटना हुँदा १४ जनाको मृ’त्यु – मनमा माया भए #RIP लेख्नुहाेस्!!
नेपाल कोरोना महामारीबाट बाहिर निस्कियो, सार्कमा नेपाल कोरोना नियन्त्रण गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्दै !
…त्यसपछि लामो समय ग’र्भ नै बसेन – नविना लामा